စိုင်းစိုင်းလားရှိုး ( ရှင်ရဲထွတ် ): မွှေးလွန်းသည့်ပန်း (သို့) MAI
Thursday, January 14, 2010 Posted by စိုင်းစိုင်းလားရှိုး at 9:35 AM
ဒီရက်ပိုင်းမှာ သတင်း တစ်ပုဒ်က အရမ်းမွှေးကြိုင်နေပါလား ? MAI လေကြောင်းလိုင်းက ၀န်ဆောင်မှုတွေ အရမ်းကောင်းနေတယ် ဆိုပဲ။ မနေ့က ဖော်ဝပ်မေးလ်ရောက်လာတော့ ဖတ်လိုက်တာ ကျွန်တော်တို့ ညီအကိုတော် ဒီစလုံးကနေ ခွင့်နဲ့ မြန်မာပြည် ပြန်တာလေ ( မြန်မာ အင်တာနေရှင်နယ် အဲယားဝေး ) လေယာဉ်ပျံ ကြီးနဲ့ပေါ့။
ဘာပဲပြောပြော အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ဘယ်သူမဆို ပျော်တပြုံးပြုံး နဲ့နေမှာပေါ့။ လေယာဉ်ကြီးစီးပြီး၊ လေဆိပ်မှာစောင့်နေမယ့် မိသားစု ၀င် တွေ မြင်ယောင်ရင်း၊ လေယာဉ်မယ် ချောချောလေး ငမ်းရင်းနဲ့... ကဲ ဘယ်လောက်တောင် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ အိမ်ပြန်ခရီးလည်း ?
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရီးစဉ်ကို စတင်ပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတာကတော့ ရန်ကုန်လေဆိပ် ရောက်တဲ့ အချိန်ပဲ။ လ၀က ဖြတ်မယ်။ ပြီးရင် ပစ္စည်းရွေးမယ်။ ဟိုမှန်တစ်ဘက်ခြမ်းက မိသားစုတွေက လက်တပြပြနဲ့ ကိုယ်တွေကလည်း အပြင် မြန်မြန် ရောက်ချင်နေပြီလေ။ ပြဿနာက ပစ္စည်းရွေးတဲ့ နေရာမှာ စတာပဲ။
ငါ့အိတ် ဘယ်မှာလည်း ? ငါ့အိတ် ဘယ်မှာလည်းနဲ့ ရှာနေတဲ့သူတွေ တော်တော်များတယ်။ ပစ္စည်းရွေးတဲ့နေရာမှာ လည်နေတဲ့ ရထား ကြီးက ခေါင်းမူးနေရောပေါ့။ အိတ်တွေက တော်တော် များများ ပါမလာကြဘူး။ အဲတာနဲ့ MAI ကောင်တာမှာ သွားမေးကြတော့ ပစ္စည်း တွေ စင်္ကာပူမှာ လေယာဉ် သယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အလေးချိန်ထက် ကျော်လွန်နေလို့ ချန်ထားခဲ့ရတာတဲ့ နောက်တစ်ပတ် သောကြာ လေ ယာဉ်နဲ့ ပါလာလိမ့်မယ်တဲ့။ အဲ့ဒီတော့မှာ လာရွေးကြပါတဲ့ ခင်ဗျး)
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တော်က မန္တလေးထိ ပြန်ရမှာလေ ရန်ကုန်မှာ ဘယ်လို လုပ်စောင့်နေရမှာတုန်း ? ကိုယ်က မြန်မာပြည်ကို ခွင့်နဲ့ ပြန်လာတဲ့ ကာလဟာ အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကာလပါ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်ချင်လို့ ထင်ပါ့ ဆရာက မန္တလေး ပြန်သွားတာ။ ချိန်းထားတဲ့ ရက် ပြန်လာရွေးတော့ ဆရာသမားအိတ်က ပျောက်သွားပါပြီတဲ့ ခင်ဗျာ....
အဲမှာ ရုပ်လုံးကပေါ်တော့မယ် MAI ရုပ်လုံးပေါ့။ ဒီပစ္စည်း ပျောက်တဲ့ ပြဿနာကို လေကြောင်းလိုင်းက လျှော်ကြေး ပေးပါ့မယ်။ ( အိတ် တစ်လုံးကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ 200 တဲ့ ခင်ဗျ ) ။ ပြီးတော့ MAI စာရွက်မှာ ဤ ဖြစ်ပြီး ကိစ္စသည် လေကြောင်းလိုင်း တာဝန် မဟုတ်ကြောင်း လက်မှတ် ရေးထိုးပေးရမယ်တဲ့ ခင်ဗျ။ ဒါဟာ ဘာလည်း စော်ကား တာ လား ? ပမာမခန့် လုပ်တာလား ? အထင်သေးတာလား ? အိတ်တစ်လုံးကို U$ 200 လို့ သတ်မှတ်ရအောင် အိတ်အတွင်းပါ ပစ္စည်းကို သူတို့တွေ သိကြလို့လား ? ပြန်လည် အစားထိုး မရနိုင်တဲ့ အရာမျိုးဆိုရင် လေကြောင်းလိုင်းက ဘယ်လို တာဝန်ယူပေးမှာလည်း ?
တစ်ထည်တောင်မှ U$ 200 ကျော်တယ် ဆိုတာ သိထားစေချင်တယ်။ နိုင်ငံခြားပြန် တစ်ယောက် သယ်ယူသွားတဲ့ အိတ်တန်ဖိုးကို အကြမ်းအားဖြင့်တော့ ခန့်မှန်းနိုင်ကြမှာပါ။ ထားလိုက်ပါတော့ အသေးစိတ်တွေ ပြောမနေတော့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ လေကြောင်းလိုင်းက လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတော့ ဆရာက ဘယ်ထိုးပါ့မလည်း။ လူကိုများ တော်တော်အတယ် ထင်နေကြလား မသိဘူး လေကြောင်းလိုင်း ၀န်ထမ်းတွေက။ ဆရာသမားက ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျားတို့ တာဝန်ပျက်ကွက်မှု၊ ခင်ဗျားတို့ လုံခြုံ စိတ်ချမှု မရှိတဲ့ လေကြောင်း ၀န်ဆောင်မှု၊ တာဝန်ကိစ္စ အ၀၀တွေကို ဒီ U$ 200 နဲ့ ပါးစပ်ပိတ်မယ်။ လျှော်ကြေးပေးမယ်ပေါ့တဲ့။ ( ကြည့်စမ်းပါဦး ခရီးသည်တွေကို စော်ကားချက် )
ဆရာသမားကတော့ ခင်ဗျားတို့ ပေးတဲ့ ငွေလည်း မယူဘူး။ ပျောက်သွားတဲ့ ပစ္စည်းကိုလည်း ရေစက်ချလိုက်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စ ကိုလည်း အများသိအောင်လည်း ဖွင့်ချရမယ် လို့ပြောပြီး စင်္ကာပူ ပြန်လာတာပေါ့။ ဟိုကလည်း အဲလို့ လုပ်မယ်ပြောတော့ နည်းနည်း တော့ ဖြုံသွားမယ် ထင်ပါ့ မလုပ်ပါနဲ့ ဘာညာ လိုက်တောင်းပန်ပေမယ့် ဆရာသမားက ရင်နာနေပြီ လှည့်ကို မကြည့်တော့ပါဘူး။ ကိစ္စတွေက ပြီးခဲ့ပြီလေ။
( အထက်ပါ အကြောင်း အရာနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သူသည် ယခု လက်ရှိ စင်္ကာပူတွင် နေထိုင်နေပါသည် )
ကျန်ပါသေးတယ်ဗျာ ... ကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းခွင်တူ ညီအကို ပြန်စဉ်တုန်းကလည်း ရန်ကုန်တွင် ပစ္စည်းပါမလာ နောက်နေ့တွေမှ လေဆိပ်တွင် သွားရောက်ရွေးယူရပါသည်။ ခွင့်ပြည့်လို့ စင်္ကာပူ ပြန်လာသည့် ခရီးစဉ်တွင်လည်း ပစ္စည်းက ရန်ကုန်တွင် ကျန်ရစ်၊ နောက်နေ့တွင်မှ အိမ်လိပ်စာ အတိုင်း လာရောက်ပို့ပေးသည်။ အဲ ကွာတယ်နော် ရန်ကုန်မှာကျတော့ ကိုယ်တိုင်ရွေးယူ။ စင်္ကာပူ မှာကျတော့ အိမ်လိုက်ပို့တယ်။ စာဖတ်သူတွေ နည်းနည်းတွေး ကြည့်ကြနော် ဘာတွေကွာတာလည်းလို့ ?
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော့် အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေ ခွင့်နဲ့ ပြန်တာပါပဲ။ စင်္ကာပူ ပြန်မယ့်ရက်စွဲကို ကွန်ဖမ်း လှမ်းလုပ်တာ ဖုန်းနဲ့ ရန်ကုန်က MAI လေကြောင်းရုံးကိုပေါ့။ ဆက်ဆံရေး တော်တော် ပြေပြစ်တာပဲတဲ့။ နာမည်ပြော ဖုန်းနံပါတ်ပြော ဂွပ် တန်းချလိုက် တာပဲတဲ့ စကားပြောခွက်ကို။ တော်တော်လေးကို ယဉ်ကျေးတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးပဲဗျ နော်.... ဘယ်လို လုပ်ပြီး အဆင့်မြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လေကြောင်းလိုင်းမှာ အလုပ်ရနေပါလိမ့်။ လမ်းဘေး ဈေးသည်လောက်တောင် ဆက်ဆံရေး မကောင်းပါလား။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ သူတွေက ကျွန်တော်နဲ့ သိကျွမ်းတဲ့ သူတွေကြီးပါပဲ အသေးစိတ် ရက်စွဲ လေကြောင်း အမှတ်စဉ် သိချင်ရင် လည်း ရှိပါတယ်လို့။
ကျွန်တော်တို့ ခရီးသည် တစ်ဦးမှာ သယ်ယူလို့ ရနိုင်တဲ့ အလေးချိန်၊ လေကြောင်းလိုင်းက ခွင့်ပြုတဲ့ အလေးချိန် အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ သယ်ယူခွင့် ရှိတာနော်။ ဒါဆို ပစ္စည်းအလေးချိန် မနိုင်လို့ ကျန်ရစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်လည်း ? သေချာတာ တစ်ခုကတော့ သပြေနုနဲ့ ရဲရင့်ကပဲ လေကြောင်းလိုင်းကို အခက်အခဲ ဖြစ်စေတာ နေပါလိမ့်မယ်.။
ပြီးတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရန်ကုန်အနေနဲ့က ကိုယ်တိုင် လေဆိပ် ဂိုဒေါင်မှာ သွားရောက် ထုတ်ယူရပြီး၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံမှာ ကြတော့ ဘာလို့ အိမ်တိုင်ယာယောက် လာပို့ပေးရတာလည်း ?
အဲဒီလို ပစ္စည်းတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့မယ် ပျောက်ရှခဲ့မယ်ဆိုရင် လေကြောင်းလိုင်းကို အားပေးသူ ခရီးသည်တွေ အနေနဲ့ ရှေ့ဆက်ပြီး.... ရှေ့ဆက်ပြီး.......
ဈေးတော့ စစ်အဲ ထက်စာရင် အများကြီး ပိုတန် တယ်ဆိုပေမယ့်...ဒါလေးတွေ သိတော့လဲ...အဟဲ... ကိုယ်တွေ့ကတော့...6နာရီတိတိ လေယာဉ်ချိန် နောက်ကျခဲ့ဘူးပြီး..စင်္ကာပူကို...ညဉ့်2နာရီ မှ ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်...း))
နောက်ဆုံး တစ်ကြောင်းရေလည်မိုက်တယ်.. ဟုတ်ပ.. အင်္ဂလိပ်လို မနေ့ကမှ ဖတ်လိုက်ရတယ်.. လေယာဉ်မယ်တောင် မောင်တွေကလည်း အတော်မိုက်ရိုင်းတယ်ဆိုပဲ.. (မြန်မာတွေဖြစ်ချင်မှလည်း ဖြစ်မှာပေါ့.. ပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့) ကျနော်တော့ သိဝူး.. အမ်အေအိုင်မစီးဖူးဘူး.. စီးလည်း စီးမှာ မဟုတ်ဘူး..
ဖြစ်မှထွက်ရလေ ပဲကြီးစိရယ်။ ကြုံရပလေ ဒီပုံဗွေမှာ။
အနော်တော့ ပိုးလေကြောင်းကိုပဲ စီးတယ်
ဟိုဘက်မှာ ခရီးဆက်ရအုံးမှာ ဆိုတော့ နောက်ကျခံနိုင်ဘူး
အဲ့အကြောင်းတွေ ကိုယ် နဲ့ မဆိုင်သေးဘူးကွယ်...း( ပြန်ဖြစ်ရင် တော့ သတိထားပါ့မယ်.
အဲဒါလေးတွေ ကြောင့် မ မိုင် (MAI) တာ ကြာပြီပေါ့၊
တခါတုန်းက ပရိုမိုးရှင်းလုပ်လို့ စီးသွားတာ ထမင်းကုန်သွားလို့ ပေါင်မုန့်စားနော်တဲ့ hot dog လေးနဲ့ :(
ပီးတော့ မမလေယာဉ်မယ်တွေက အမှီးတို့လို ညီမလေးတွေ အစ်မတွေ ခေါ်ရင် မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ ကိုကို တွေ မောင်မောင်တွေ ခေါ်ရင် ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ အရမ်းကို စွိဖြစ်တာပါပဲ။ ဖြူဖြူကောင်တွေ ခေါ်ရင် ပိုစွိတယ်။ ကိုယ်တွေ့ပဲ။ :) အဲဒီတခေါက်ပဲ ပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ MAI ကို အားပေးခဲ့မိတာပါ။ ဦးနာအောက်ခေတ်တုန်းကလို ကိုယ့်အမျိုးသားပိုင်လေကြောင်းကို အားပေးချင်ပေမယ့် ကိုယ့်အမျိုးသားပိုင် လေကြောင်းက ပိုဆိုးနေတယ်လေ။
အရင်တုန်းက Silk Air ကိုဘဲ အမြဲစီးဖြစ်နေတာ၊ ဒီတစ်ခေါက် December ပြန်တော့ Silk Air က Booking ရက်မရတော့ ရက်ရတဲ့ MAI ကို ချိပ့်မိတာပေါ့။ ရန်ကုန်အပြန်မှာ အားလုံး အဆင်ပြေပေမယ့်။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ လေကြောင်းလိုင်းကို comfirm လုပ်တာ အခုနကပြောသလိုဘဲ၊ စကားတစ်ခွန်း နှစ်ခွန်းပြောပြီး အသံမာမာနဲ့ ဖုန်းပစ်ချသွားတယ်ဗျာ။
အပြန်မှာတော့ လေကြောင်းလိုင်းက မမ တွေက မာသလားမမေးနဲ့ မနက်မိုးလင်းကတည်းက ကျောက်ခဲ ရေစိမ်သောက်လာသလားဘဲ။ လေယာဉ် ထွက်မယ့် အချိန် မှာ လေယာဉ် မရှိလို့ ၁ နာရီခွဲလောက် နောက်ကျပြီးမှ ထွက်ခဲ့ရတယ်။ တော်တော် ဆိုးတဲ့ MAI ဘဲဗျာ။ နောက်ဆို တော်ပါပြီ.....